Wadaadkii Mayalka Adkaa Ee Abuu Hamza oo Ka Soo Hormuuqday Maxkamad Ku Taala Magaalada New York.(Hadhwanaagnews) Sunday, October 07, 2012 New York-(HWN)- Wadaadka mayalka adag ee Abuu Hamza oo maalin ka hor laga soo duuliyay dalka england ayaa saacado kadib ka soo New York-(HWN)- Wadaadka mayalka adkaa ee Abuu Hamza oo maalin ka hor laga soo duuliyay dalka england ayaa saacado kadib ka soo hormuuqday makamada ku taala magaaalada New York ee dalka Maraykanka.
Wadaadkaan waxaa maxkamadeyntiisa ku wehliya afar ruux oo kale oo iyana falala argagixisa ah loo heysto.
Dambiyada abuu Hamza loo heysto ayaa kala ah, in gudaha dalka Maraykanka ah uu ka sameeyay xero lagu tababaro dadka falalka argagixisada ah sameynaya,afduubkii loo geystay dhowr iyo 10 dalxiisaayal ah
iyo falal kale argagixa ah.
Maxkamada dacwada qaadeysay wali go aan rasmi ah kama aysan soo gaarin arinta abuu Hamza oo dambiyo culus loo heysto maadaama wadamada caalamka shaqsigii lagu helaa falal argagaixiso ah uu muteysan karo xukun xabsi daain ah.
Geesta kale afarta ruux ee kale ee Maxkamada lala saaray abuu Hamza waxaa loo heystay falal argagixiso ah iyo qarxyo ka dhacay safaaro ku yaala Kenya iyo Tunusia waxaana shantooda Maxkamada ay ka soo saari doontaa go´aan maxkamadeyn ah.